ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၆ – MoeMaKa Burmese News & Media
၁။ တပ်မတော် ယန္တယားအဆောက်အဦး ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ဝမ်းခေါင်ခေါင် ဖြစ်ရခြင်း ဇာတ်လမ်းအစမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးရဲ့ အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အဖြစ် သတ်မှတ်တာက စ ပါတယ်။ တရုတ်၊ရုရှားတပ်မတော်မှာ ရှိတဲ့ ဖီးမာရှယ်၊ပထမဗိုလ်ချုပ်ကြီး စတာတွေကို အတုယူပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက တိုက်ရိုက်ယူပြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအဆင့်ကို ဦးမောင်အေးတက်လာမှ သတ်မှတ်လာပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ထိပ်ပိုင်းမှ ပိတ်ထိုင်ပြီး တပည့်လက်အောက်ငယ်သားများအား ရာထူးအဆင့်များကို တပ်အတွင်း ဖန်တီးပေးကာ Power line up နဲ့Duty function ညှိပေးခဲ့ပါတယ်။
၂။ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် တွေရအောင် ဦးတင်ဦးကို ကစထမှူး ရာထူး ပေးသလို ဦးခင်ညွှန့်အား မဟာဗျုဟာလေ့လာရေးဌာနကြီးမှူး ရာထူးပေးပါတယ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်ကို အတွင်းရေးမှူး(၃)ခန့်လိုက်တဲ့ အတွက် ပြိုင်ဘက် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်လှကို တပ်မတော်ရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အထက်ပါအရာရှိကြီး ၄ဦး တွေဟာ မူလရာထူးဌာနတွေ မပါသေးဘဲ အဲဒီအဆင့်တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် သာဖြစ်နေလို့တွဲကိုင်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ တဖန် ဦးသန်းရွှေက ဦးမောင်အေးနဲ့ဦးခင်ညွှန်ရဲ့ Power ထိန်းချုပ်ချင်လို့ နတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းအား စစ်ရုံးကိုဆွဲ တင်ပြီး ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ညှိကွပ်)ရာထူး ဖန်တီးကာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် တိုိးပေးခဲ့ပါတယ်။ ညှိကွပ်က တပ်ရဲ့power ၃ ထိပ်နားမှာ ထားလိုက်သဖြင့် Power၄၊၅ ဖြစ်သွားတဲ့ ကာချုပ်(ရေ) နဲ့ကာချုပ်(လေ)တို့ခင်မျာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နဲ့သာ ငုပ်တုတ် ထိုင်လိုက်ရပါတယ်၊နိုင်ငံတကာယှဉ်ရင် ကာချုပ်(ရေ)နဲ့ကာချုပ်(လေ)တို့ဟာ မျက်နှာငယ်လာလို့၂၀၁၁ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကျမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် တိုးပေးလိုက်ပေမဲ့ ညှိကွပ် ရာထူးအောက်မှာဘဲ ထားရှိတုံးဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဦးခင်ညွှန့်ကို ဒီပဲယင်း အကျပ်အတည်း ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးပေးလိုက်ပြီး သူ့အား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်တိုးပေးဖို့ရှိရာ တပ်တွင်းမှာ ရှာမရသဖြင့် နအဖဥက္ကဌရဲ့ စစ်ဖက်အကြံပေးဖြစ် ဖန်တီးထား ပြန်ပါတယ်။ ပိုဆိုးသွားတာက ဦးသိန်းစိန်၊ဦးသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦး၊ဦးတင်အေးတို့ရဲ မူလရာထူး၊အဆင့်တွေဟာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသာ ဖြစ်လျှက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်တွေ ဘယ်လိုတွဲဖက်သွားပြီး ပခုံးပေါ်အပွင့်တင်သွားသလဲ ဆိုတာနားမလည်လောက်အောင်ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတူဘဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဒါဇင် နဲ့ချီ မှိုလိုပေါက်အောင်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီဲး နယ်ဘက်ရောက်ရင် သိမ်ငယ်သလို ငိုပြလို့ Power တင်တာဖြစ်တယ်၊နောက်မှာ တပ်မရှိရင်မနေတတ်တါမို့ ဦးခင်ညွှန့်အားမူလထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဆက်လက်တွဲပေးမိရာက ကိုယ့်ရူးကိုယ်ပါတ်တဲံ့ကိန်း ဆိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလည်းတပ်ချုပ်က ကိုမြထွန်းဦးကို ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးပေးချင်တာနဲ့ ကာလအတန်ကြာ အစားထိုးမခန့်သေးတဲ့ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ကြည်း)နဲ့ကစထ မှူးရာထူးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
၄။ တပ်မတော်ရဲ့ အဓိကKey ဌာနများကတော့ ဦးဏှောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ ကက(ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးဌာနနဲ့ နှလုံးသားလိုတင်စားတဲ့ ကက(ကြည်း)တာဝန်ဌာနတွေက အားပြိုင်မှူများရှိပါတယ်။ ဌာနအချင်းချင်းစာပို့ရမှာ တင်စီးမခံတာရှိပါတယ်၊ဌာနအကြီးအကဲများကတော့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ (စစ်ဆင်ရေး)ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းစိန်(ယခုသမ္မတ)နဲ့(တာဝန်) ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဝင်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ဝင်းကို ပြင်ပ လူသိနည်းလို့ အနည်းငယ်ရှင်းပြလိုရာမှာ ကကထုပ် ညွှန်မှူးအဖြစ်တွဲကိုင်ရသူဖြစ်ကာ တပ်မတော်တခုလုံးရဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို အလွတ်ရတာမို့ တပ်ချုပ်ရဲ့ အထူးအားကိုးရသူဖြစ်လို့ ဘယ်တော့မှ P.A ရုံးခန်းမှာ အချိန်ကုန်လို့ဆိုပြီး မထိုင်ဘဲ လူရှင်းကြောင်းသိရတာနဲ့ တပ်ချုပ်တံခါးကို ခေါက်ကာ ခွင့်တောင်း မနေဘဲ ဒဲ့ ဝင်ခွင့်ရသူဖြစ်ပါတယ်။ ကကလှမ်းက ကပစ(၄)အနီးနေရာတခုမှနေပြီး အင်လျားကန်ကိုဖြတ်ကာ အကျယ်ချုပ်ကျနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့သွားမည်ပြုရာ ကန့်သတ်ဧရိယာဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ဝင်းက ခပ်ပြတ်ပြတ် မဖြတ်နဲ့လို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၅။ တကယ်တော့ တနှစ်ပါတ်လုံးအလုပ်လုပ်နေရတာက ကက(ကြည်း)တာဝန်ဖြစ်ကာ ကက(ကြည်း) စစ်ဆင်ရေးက စစ်ဆင်ရေးကြီးမရှိပါက သာသာယာယာ မှေးထားလို့ပါတယ်။ တပ်မစစ်ဆင်ရေးလဲလှယ်မှူ၊ အဓိကနဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊နိုင်ငံတကာကိစ္စ၊ကကရေနဲ့ကကလေ ကိုအမိန့်ပေးပိုင်ခွင့်၊ရှေ့တန်း ရိက္ခာစုပုံ၊ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် အလုပ်များကို စစ်ဆင်ရေးက ကိုင်တွယ်ရပါတယ်၊ တာဝန်ကတော့ လက်နက် ခဲယမ်းစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ စစ်ရေးချုပ်၊စစ်ထောက်ချုပ်၊လကခ၊ ကျန်တဲ့ ညွှန်မှူးများနဲ့တိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ဝင်းကို ချက်ချင်းအနားမပေးသေးဘဲ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက် ခန့်ပြီးနောက်သူပင်စင်ယူလိုက်ချိန်မှာ(တာဝန်)ကနိမ့်သွားကာ (စစ်ဆင်ရေး)ကို တင်ပြလာဖို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
၆။` ကက(ကြည်း)စစ်ဆင်ရေး မှာ ယခင်က ဒုတပ်ချုပ် နဲ့ ကာချုပ်(ကြည်း)ဟာ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်နဲ့တွဲ လုပ်ရပေမဲ့ ယခုတော့ ညှိကွပ် အပြင် စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ကြည်း)ပါ ရှိလာလို့ အဆင့်တွေများလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လောက်ကိုင်ဒေသလို ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲနေတဲ့ တပ်မမှူးဟာ လိုလားချက်ရဘို့အရေး ထိပ်ပိုင်းက တပ်ချုပ်၊ဒုတပ်ချုပ်၊ညှိကွပ်၊စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်၊စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်၊ကစထ၊တိုင်းမှူးစတဲံ့ သူတွေထံ အဆင့်ပေါင်း(ရ)ဆင့်ဖြတ်ပြီးမှ ရောက်လာရတဲ့အတွက် ဆရာများသားသေဖြစ်ကာ စစ်သည်အသက်တွေပေး နေရတာ ရင်ထုမနာဖြစ်ရပါတယ်။ စစ်သည်တွေနဲ့အရာရှိညီငယ်တွေ တာဝန်ကျေပြွှန်လို့ဂုဏ်ပြုချီးကျူးပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း နောက်ကမေတ္တာစေတနာနဲ့ ပံ့ပိုးထောက်ခံပေးတယ် ၊ ခေတ်မီလေယာဉ်တွေ။ အမြောက် တွေနဲ့ဒလစပ်ပစ်ခတ်ရရဲ့နဲ့ တောင်ကုန်းစခန်းတွေကို ဘာလို့အသည်းအသန်တိုက်နေရတုံးဘဲဆိုတာ အဖြေ ရှင်းရှင်းလေးထွက်လာတာက Commander ညံ့ နေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်တပ်မတော်မှာ နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့တစိတ်တဒေသကို ထိပ်ပိုင်းက ခပ်ညံ့ညံ့အရာရှိကြီးတချို့လေ့လာနိုင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရ။ ကွမ်းလုံတိုက်ပွဲကို ကြီးကြပ်နေတဲ့ နပိုလီယံလို့ခေါ်တဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းရီဟာ ရန်သူ့တောင်ကုန်းကို မသိမ်းနိုင်ရင် သူ့အလောင်းကိုသာ လာယူပါလို့ဆိုတယ်။ အဲဒီတုံးက ကွမ်းလုံပြည်သူလူထုက စေတနာလုပ်အားပေးနဲ့ ရိက္ခာပို့ဒဏ်ရာရစစ်သည်သယ်ဆောင်ကူညီပေးခဲ့သလို အထက်က တိုင်းမှူးလိုမျိုးအရာရှိကြီးများက ဝင်ရောက်စွပ်ဖက်မှူ မရှိဘဲ နပိုလီယံကြီးလိုတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်း၊၁၀၅အမြောက်များ ပံ့ပိုးပေးကာ လွတ်လပ်စွာကွပ်ကဲခွင့်ပေးလို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သီဟသူရ၊သူရ စစ်မောင် ဟာ တိုင်းမှူးဖြစ်နေတာတောင် ရှေ့တန်းစစ်သည်များနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းကာ ကာဘိုင်ကိုင်ပြီး Fighter လုပ်ခဲ့လို့ စစ်သည်တွေရဲ့ကြည်ညိုမှူ အထူးရသူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာ ချကြတော့မဲ့ ဆဲဆဲ စစ်သူကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ကာ အမြောက်ကုန်းတွေအား အတွင်းရေးမှူး၂ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနဲ့အတူ လိုက်ကြည့်နေစဉ် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျတဲံ့အထဲပါသွားလို့ ထိုင်းက စိတ်သက်သာ ရ သွားပါတယ်။ သူဟာ စည်းရုံးရေးကောင်းတာမို့ရေး၊မြိတ် နယ်မြေလူထုရဲ့ချစ်ခင် ထောက်ခံမှူရသလို ထိပ်ပိုင်းက တပ်ချုပ်၊ဒုတပ်ချုပ်၊ အားလုံးတို့ကလည်း(တပ်မှာဒီလိုဖြစ်စဉ်တခါမှမရှိခဲံ့) သဘောကြကျလို့ အသက်ငယ်ဆုံးတိုင်းမှူးနဲ့ နောင်တပ်ချုပ်အလျောင်းအလျာအဖြစ်အမှတ်ပေးခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ နောက်တဦးကတော့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်လှဖြစ်ပြီး သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ နယ်မြေခံလူထုစည်းရုံးရေးအဖြစ် မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ထံ လှူုဘွယ်ပစ္စည်းများဆက်ကပ်ကာ ဆရာတော်ကိုကိုးကွယ် သောဗုဒ္ဒဘာသာဝင်DKBAကရင်လက်နက်ကိုင်များနဲ့ ကရင်လူထုအားစည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ စစ်ရုံးရှိညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်များကို ရှေ့တန်းကွပ်ကဲမှူဌာနချုပ်သို့ ဆွဲချသလို နီဆန်းပက်ိထရီု၎x၄ ကားများနဲံ့နောက်တန်းမှရိက္ခာ နှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများကို ရှေ့တန်းကျကျ ရှမ်းရွာသစ်၊ မဲသဝေါ၊ကမာမောင်း နေရာမျိုးမှာ တောင်လိုပုံလို့ CADCOD ဂိုဒေါင်များမှာ ပြောင်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချပ်ဝတ်တန်ဆာ၊စစ်ဝတ်ပစ္စည်းများပါပုံကာ တောင်ကုန်းမှ ဆင်းလာတာနဲ့ ကကနက်၊ကကလျှပ်၊ကကပံ့ မှချက်ခြင်းလှဲလှယ်ဖြည့်တင်းပေးသလို စစ်ကြောင်းမှူးများခေါင်းခဲရတဲံ့ ကျဉ်သုံးစာရင်း၊ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးကိစ္စတွေကို သက်ဆိုင်ရာတပ်မှ တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီးများနဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ခံများနဲ့ door to door ဒဲ့ ရှင်းပေးတဲ့ အုပ်ချုပ်မှူစွမ်းရည် တပ်သမိုင်းမှာစံချိန်သစ်တင်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာမြှင့်တင်ရာမှာ တပ်ချုပ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချပြီး အရာရှိ၊အခြားအဆင့်များကို Field Jump Promotion အနေနဲ့ ချက်ခြင်း စခန်း၊တောင်ကုန်းရတာနဲ့ ပခုံး၊လက်မောင်းတို့တွင် အပွင့်၊အရစ်တပ်ပေးတာဟာ ရဲစိတ်ရဲမာန်များမြှင့်မားလာပါတယ်။
Heart ထိချက်ကတော့ ဒဏ်ရာရလူနာကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ချက်ခြင်း သယ်ပေးသလို အပြန်မှာ ရန်ကုန်မှ ပြည်သူလူထုပို့လိုက်တဲ့ အငွေ့တထောင်းထောင်း ထမင်းထုပ်၊ ဒန်ပေါက် ၊ဆေးလိပ်၊အသားငါး၊အသီးအရွက်ေ၇ှ့တန်းထိပို့ပေးတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာအားကြောင့် စစ်သည်တွေဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွှနေဆဲမှာပင် ဦးမောင်လှက “အဘ မင်းတို့ကို ယုံတယ်၊အောင်ကိုအောင်ရမယ်၊ မင်းတို့နဲ့အတူ အနားမှာရှိတယ်”လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာ“အဘနောက်မှာနေပါ၊ အဘထိလို့မဖြစ်ဘူး၊အသေခံချမယ်“်လို့ပြော လိုက်တဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟာ အရာရှိတွေအားလုံးကျောထဲကို စိမ့်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။
စစ်ရေးစွမ်းရည်မှာလည်းပြောလို့ပင်မကုန်အောင် အကျဉ်းပြောရရင် ၇၆မမအမြောက်ကိုပြောင်းထိုးချိန် တိုက်ရိုက် ပစ်ခိုင်းသလို ကာဂူးစတပ်နဲ့ကတုတ်ဝကိုပစ်ခိုင်းသည့်အပြင် လက်နက်ကြီးကျောင်းများမှ expertဆရာကြီးများကို ခေါ်ခိုင်းကာ ပစ်မှတ်ဂွင်တိကျအောင် မှတ်ပုံတင်လုပ်စေခြင်း ပစ်အားကိုထိရောက်အောင် လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၉။ ယခုလောက်ကိုင်တိုက်ပွဲကွပ်ကဲနေတဲံ့ လားရှိုးမြို့ပေါ်မှာ တဖဝါးမှမခွါချင်ကြတဲ့ ကစထမှူး၊ တိုင်းမှူး၊ စစ်ရုံး မှာကွပ်ကဲနေကြတဲံ့အရာရှိကြီးများဟာ လားရှိုးကို ရန်သူဝင်ပစ်သွားတာဟာ ရှက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သတ္တိကြောင်နေရင် အလိုက်သိသိထွက်စာတင်ဖို့လိုတယ်။ လက်အောက်ကို အပြစ်ပုံမချ စတမ်းတာဝန်ယူရဲရမယ်။ တရုတ်နယ်စပ်ထဲ မှားပြီးဗုံးကြဲမိလို့ပိုင်းလော့ကို အရေးယူဖို့ တဖက်ကတောင်း ဆိုတာကို ပယ်ချဖို့ဝန်လေးနေတာ အံ့သြမိပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်တွေဟာအမောင်းသင်တွေဖြစ်သလို ဂျက်တွေကလည်း စွမ်းအားကျနေရဲ့သားနဲံ့ ဗုံးကြဲဖို့အမိန့်ပေးတဲ့သူကို အရေးယူရပါမယ်၊ ဒီလေယာဉ်တွေကိုဝယ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးသူဟာ တာဝန်သိသိ ထွက်စာတင်သင့်တယ်။
၁၀။` တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယူဖို့အပြုသဘောတိုက်တွန်းချက်နှင့်တကွ စွမ်းရည်၃ရပ်ပြည့်မှီရေး၊ လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တက်လှမ်းနိုင်ဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချက်နိဂုံးချုပ်အပိုင်း (ရ)အားဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။
← ကာတွန်း ဘီရုမာ – သင်္ကြန်စာ
ဧပြိ ၁၂၊ ၂၀၁၅ – မိုးမခရေဒီယို ဆစ်ဒနီ →
One thought on “ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၆”
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်ထက်မင်း ခင်ဗျားရဲ့အ ရေးအသား
ဥာဏ်တွေပွင့်လာသလိုခံစားရတယ် ,ကမာ ဇင်ယော်ပါ